को क्रान्तिकारी, को संशाेधनवादी ?
चैत्र ११ गते, २०७१ बुधवार
25th March, 2015 Wed ०८:५०:२० मा प्रकाशित
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अत्यधिक प्रयोग हुने शब्द हुन्—क्रान्तिकारी र संसोधनबादी । आफ्नो परिभाषा गर्न क्रान्तिकारी शब्दको प्रयोग गर्ने र अरुलाई गाली गर्न संसोधनबादी शब्दको प्रयोग गर्ने पुरानो बाम रोग हो । सर्वविदितै छ ,क्रान्तिकारी भन्नाले विद्यमान समाजको राजनीतिक,आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन संगठित प्रयास गर्ने ब्यक्ति बुझिन्छ भने सशोधनबादी भन्नाले माक्र्सबादका आधारभूत मान्यताहरुमा फरक दृष्टिकोण राख्ने वा परिमार्जन गर्न चाहने ब्यक्तिलाई बुझाउँछ ।
नेपालमा कसले कतिबेला कसलाई संशोधनबादी भन्यो यकिन गर्न कठिन छ । नेपालमा एक बामपन्थी गूटले अर्को गूटलाई विल्ला भिराउने शब्दको रुपमा प्रख्यात छ संशोधनबाद । आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउन अरुलाई संशोधनबादी भन्नै पर्ने
माक्र्सकाे देहवसान भएलगत्तै लेनीनको उदय भएको थियो । युरोपका प्रायः सबै मुलुकमा एकै पटक समाजबाद आउने माक्र्सको विश्लेषणमा लेनीनले पहिलो संशोधन गर्दै समाजको परिस्थितिमा परिवर्तन आएकोले कुनै एउटा देशमा पनि समाजबाद लागू हुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष मात्र निकालेनन् , लागू गरेर देखाइदिए । तर उनलाई संशोधनबादी भनिएन ,रुसका अरु नेताहरुले संशोधनबादीको विल्ला भिर्नु पर्यो । माक्र्सले पुजीबादका विकास भएपछि सर्बहारा बर्गको संगठित विद्रोहबाट समाजबादी सत्ता कायम हुन्छ भनेका थिए । त्यस्तो सामाजिक अबस्था नआउदै माओले चीनमा नौलो जनबादी शासन ब्यबस्था लागू गरे । माक्र्सको विश्लेषणभन्दा फरक भए पनि त्यसलाई संशोधनबाद भनिएन,क्रान्तिकारिता भनियो । यसलाई चिनिया परिस्थितिमा माक्र्सबादको सिर्जनात्मक प्रयोग भनियो । नेपालमा कसले कतिबेला कसलाई संशोधनबादी भन्यो यकिन गर्न कठिन छ । नेपालमा एक बामपन्थी गूटले अर्को गूटलाई विल्ला भिराउने शब्दको रुपमा प्रख्यात छ संशोधनबाद । आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउन अरुलाई संशोधनबादी भन्नै पर्ने । पछिल्लो समय कमरेड किरणले कमरेड विप्लवलाई नवसंशोधनबादी भन्नुभएछ । यसको कारण के हुन सक्छ भने उहाले पहिले नै कमरेड प्रचण्ड र बाबुरामलाई संशोधनबादी भनिसक्नु भएको थियो । निःसदेह, माक्र्सबाद विज्ञान हो र वितेका दुई शताब्दी यस विज्ञानले दर्शन र राजनीतिको क्षेत्रमा तुमुलकारी परिवर्तन ल्याइदियो । त्यसो भन्दैमा यसका बारेमा प्रश्न उठाउनै नपाउने भन्ने होइन । विश्व समाजमा आएको भिमकाय र बहुआयामिक परिवर्तनले यसलाई माक्र्स, लेनीन वा माओका उद्दरणले मात्र समेट्ने अवस्था अब रहेन । विडम्वना, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका अघिल्लो पुस्ताका नेताहरुले माक्र्स, लेनीन र माओलाई सत प्रतिसत सत्यको रुपमा बुझे र आफ्नो बुझाइभन्दा अलि फरक ढंगले बुझ्ने र ब्याख्या गर्नेलाई संसोधनबादी, कठमुल्लाबादी, सारसंग्रहबादी, दक्षिणपन्थी जस्ता विल्ला भिराएर गाली गरिरहे । आएका नयाँविचारलाई बहस र ब्यवहारिकताको कसीमा घोट्नुको सट्टा त्यस्ता विचारलाई निःषेध गर्ने परिपाटीको विकास गरियो । त्यही कारण कम्युनिष्ट आन्दोलनमा निरन्तर फूट र विभाजन भइरह्यो , भइरहेछ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रमुख हिस्सा माओबादी नभई क्रान्तिकारी होइन्न भन्ने मान्यता राख्दछ । त्यसो भए लेनीन र स्तालिनलाई क्रान्तिकारी भन्ने कि नभन्ने ? किनभने त्यतिबेला माओबादको शुरु नै भएको थिएन । पेरिस कम्युन क्रान्तिकारी कदम थियो कि थिएन ? किनभने त्यतिबेला लेनीन ,स्तालिन र माओ कोही पनि थिएनन् । त्यसकारण सही कुरा त के हो भने माक्र्सबादका सार्वभौमिक अवधारणालाई पक्रेर आफू वरिपरिको समाजको आमूल परिवर्तनको नेतृत्व गर्नु क्रान्तिकारिता हो । न कि यो ‘बादी’ र उ ‘बादी’ भनेर झगडा गर्नु ।